ဇူးဇူး – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Mon, 01 Feb 2021 08:16:53 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.7.1 https://burma.irrawaddy.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-irr_fav-32x32.png ဇူးဇူး – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com 32 32 အရေးပေါ်ကာလပြီးပါက ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်ကျင်းပ၍ အာဏာပြန်လွှဲပေးမည် ဟုဆို https://burma.irrawaddy.com/news/2021/02/01/237422.html Mon, 01 Feb 2021 08:16:53 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=237422
ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပြီး မဲစာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင် လုပ်ဆောင်သင့်၊ လုပ်ဆောင်ထိုက်သည်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည်
The post အရေးပေါ်ကာလပြီးပါက ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်ကျင်းပ၍ အာဏာပြန်လွှဲပေးမည် ဟုဆို appeared first on ဧရာဝတီ.
အရေးပေါ်ကာလဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) နှင့် အညီ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ပါတီစုံ ဒီမိုကရေစီ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲအား ပြန်လည် ကျင်းပ၍ အနိုင်ရသည့် ပါတီ အား ဒီမိုကရေစီ စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အညီ နိုင်ငံတော် တာဝန်အား လွှဲအပ်နိုင်ရေး ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဖြစ် ကြောင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးက ယနေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်) ထုတ်ပြန် ကြေညာလိုက်သည်။
ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက နေပြည်တော် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အိမ်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီ အစည်းအဝေးတွင် ယာယီ သမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေက ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၄၁၇ အရ နိုင်ငံတော်ကို အရေး ပေါ် အခြေအနေ ကြေညာပြီး ပုဒ်မ ၄၁၈၊ ပုဒ်မခွဲ(က)အရ နိုင်ငံတော်၏ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေး အာ ဏာများကို တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ထံ လွှဲအပ်တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း ပြောကြားပြီးနောက် တပ်မတော် ကာ ကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က အထက်ပါ အချက်ကို ထည့်သွင်း ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ၎င်းက “တပ်မတော် အနေနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (၂၀၀၈ ခုနှစ်) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို လေးစားလိုက်နာပြီး နိုင် ငံတော်ရဲ့ တာဝန်အရပ်ရပ်ကို ယာယီ သမ္မတက လွှဲပြောင်းတာ ဝန်ပေးထားတဲ့ ယနေ့မှစပြီး စတင် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော် တာဝန်ဆောင်ရွက်ခြင်းကို ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ၂၀၀၈ ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေ ခံ ဥပဒေကို ကျော်လွန်ခြင်း မရှိတဲ့ တည်ဆဲဥပဒေများအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း” လည်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
တပ်မတော်က အာဏာ လွှဲပြောင်းယူလိုက်ကြောင်း ၎င်းတို့ပိုင် မြဝတီ ရုပ်သံသတင်းတွင် ကြေညာပြီးနောက် ပထမဆုံး ထုတ်ပြန်သည့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး၏ ကြေညာချက် အမှတ် ၁/၂၀၂၁ တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကို ပြန်လည် ဖွဲ့စည်းပြီး မဲစာရင်းများ စစ်ဆေးခြင်း အပါအဝင် လုပ်ဆောင်သင့်၊ လုပ်ဆောင်ထိုက်သည်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမည် ဟူ၍လည်း ပါရှိသည်။
လတ်တလော ဖြစ်ပွားနေသည့် ကိုဗစ်-၁၉ ကာကွယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို အရှိန်အဟုန်မပျက် ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွား မည်၊ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါကြောင့် ထိခိုက်ခဲ့သည့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများအား ဖြစ်နိုင်သမျှ နည်းလမ်းများဖြင့် ကုစားသွားမည်၊ တနိုင်ငံလုံး ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိရေးအတွက် တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) ပါ သဘောတူညီချက်များ အတိုင်း ဖြစ်နိုင်သမျှ အလေးထား လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ယင်းအစည်းအဝေးသို့ ယာယီသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုတပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် အမျိုးသားကာ ကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်သည်။
]]> သမ္မတနှင့် ရွေး/ကော် ဥက္ကဋ္ဌတို့ စာချွန်တော် လျှောက်ထားခံရမှု ကြားနာ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/29/237337.html Fri, 29 Jan 2021 13:41:45 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=237337
ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရုံးမှ ၎င်းတို့၏ လျှောက်ထားမှုအား လက်ခံမည်၊ လက်မခံမည်ကို ၂ ပတ်ခန့် အကြာ တွင် အကြောင်းပြန်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
The post သမ္မတနှင့် ရွေး/ကော် ဥက္ကဋ္ဌတို့ စာချွန်တော် လျှောက်ထားခံရမှု ကြားနာ appeared first on ဧရာဝတီ.
၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နစ်နာမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP)၊ အမျိုးသားနိုင်ငံရေး ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (DNP) တို့က နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေး ကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) ဥက္ကဋ္ဌတို့အား ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ထံ စာချွန်တော် လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ် သက်၍ ယနေ့ (ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်) လျှောက်လဲချက်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လျှောက်ထားသူများနှင့် ၎င်းတို့၏ သက်ဆိုင်ရာ ရှေ့နေများက စာချွန်တော် လျှောက်ထားမှုအား မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လက်ခံသင့်ကြောင်းကို Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီး ၃ ဦးရှေ့ ၌ လျှောက်လဲချက် တင်သွင်းခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မန္တလေးမှ အမျိုးသားရေး ရှေ့နေတဦးဖြစ်သူ ဦးဇော်ဝိတ်နှင့် DNP ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမောင်တို့က သမ္မတ အပါအဝင် ၄ ဦးနှင့် UEC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း အပါအဝင် ၁၅ ဦးတို့အား ‘အာဏာပိုင်မေး စာချွန်တော်အမိန့်’ ထုတ်ဆင့်ပေးရန် လျှောက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
USDP ပါတီ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးလှသိန်းက UEC ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်း အပါအဝင် ၁၅ ဦးကို ‘အာဏာပေး စာ ချွန်တော် (သို့) အာဏာပိုင်မေး စာချွန်တော် အမိန့်’ ထုတ်ဆင့်ပေးရန် လျှောက်ထားပြီး စုစုပေါင်း စာချွန်တော် လျှောက် ထားမှု ၃ မှု ဖြစ်သည်။
စာချွန်တော် လျှောက်ထားသူ USDP မှ ဦးလှသိန်းက “တခြားသူတွေလည်း လျှောက်လဲချက် တင်တယ်။ အန်ကယ်တို့ လည်း လျှောက်လဲချက် တင်တယ်။ နောက်တော့မှ အန်ကယ်တို့ဟာတွေ လက်ခံတယ်၊ မခံဘူးဆိုတာ သူတို့ ပြန်ကြားမှာ” ဟု ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ယခုလို စာချွန်တော် လျှောက်ထားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်၊ လျှောက်ထား ချက်တွင် မည်သည့်အချက်အလက်များ ပါဝင်သည်ကိုမူ confidential (လျှို့ဝှက်) ဖြစ်၍ မပြောနိုင်သေးကြောင်း၊ တရားရုံး က လက်ခံပြီဆိုမှသာ ပြောမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ဦးလှသိန်းက “ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်လို့ နစ်နာမှုရှိတဲ့ဟာတွေကို စာချွန်တော်တင်တယ်။ တရားသူကြီးအဖွဲ့ကနေ ကြားနာတယ်။ ကြားနာပြီးတော့ အဲဒီစာချွန်တော်တွေ လက်ခံမယ်၊ မခံမယ်ဆိုတာတော့ နောက် ၁၄ ရက် ကြာရင် ပြန် ပြီးတော့ အကြောင်းပြန်ပေးမယ်လို့ သိရတယ်” ဟု ဆိုသည်။
အာဏာပေး စာချွန်တော်အမိန့် ဆိုသည်မှာ တရားဝင် အခွင့်အာဏာရှိသူ တဦးဦး (သို့) အဖွဲ့အစည်းတခုခုက ဖြစ်စေ၊ အစိုး ရဌာန တခုခုကဖြစ်စေ အပ်နှင်းထားသော လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက် ပျက်ကွက်မှုအား ဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်စေရန် ရေးသားထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်စာကို ဆိုသည်။
အာဏာပိုင်မေး စာချွန်တော်အမိန့် ဆိုသည်မှာ အစိုးရဌာနတခုခု (သို့) အခွင့်အာဏာ အပ်နှင်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းတခု ခုသည် တဦးတယောက် (သို့) အများအပေါ်တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း၊ လုပ်ထုံး လုပ်နည်း၊ အမိန့်၊ အမိန့်ကြော်ငြာစာ၊ ညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ထားခြင်း ရှိမရှိ စိစစ်ကြားနာ၍ ဥပဒေနှင့် ညီ ညွတ်ခြင်း ရှိမရှိ ရေးသား ထုတ်ပြန်သည့် အမိန့်စာကို ဆိုသည်။
USPD ပါတီ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခင်ရီက မဲမသမာမှုများအား ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်နှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတ ထံ ဦးတိုက်လျှောက်ထားခဲ့သော်လည်း မည်သည့် တုန့်ပြန်မှုမှ မရသဖြင့် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်တွင် စာချွန် လွှာ တင်သွင်းရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက်နေ့က သံလွင်လမ်းတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ၌ ပြောဆိုထားသည်။
DNP ပါတီကလည်း UEC ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အဆင့်ဆင့်သော ရွေး/ကော်အဖွဲ့ခွဲ တာဝန်ရှိသူများသည် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေ၊ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥပဒေပါ တာဝန်များကို ပျက်ကွက်ကြောင်း၊ ဥပဒေနှင့် မညီညွတ်မှုများ ပြုလုပ်သည်ဟု ဆိုကာ စွပ်စွဲထုတ်ပြန်ထားသည်။
ယနေ့ တရားရုံးတွင် လျှောက်လဲချက် ပေးသည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန် DNP ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုးမောင် နှင့် ဦးဇော်ဝိတ်တို့ကို ဆက်သွယ်ရာ ဖုန်း လက်ခံဖြေကြားခြင်း မရှိပါ။
တရားရုံး၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအရ ကနဦး ဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့ တရားသူကြီး ၃ ဦးပါအဖွဲ့က ယနေ့ တင်လိုက်သည့် လျှောက် လဲချက်များနှင့် ကနဦးတင်ထားသည့် လျှောက်ထားချက်များကို အသေးစိတ် စိစစ်ကာ ဥပဒေများနှင့် တိုက်ဆိုင်ညှိနှိုင်း ပြီး နောက် လက်ခံပြီး ဆက်လက် ကြားနာစစ်ဆေးမှု ပြုသင့်၊ မပြုသင့်ကို စည်းဝေး ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေအကြံပေး ဦးခင်မောင်မြင့်က ရှင်းပြသည်။
“အကယ်လို့ သူတို့က ဆက်လက်ကြားနာရန် မသင့်လို့ ဆုံးဖြတ်ရင် စာချွန်တော် လျှောက်ထားမှုက အဲဒီမှာ ပြီးသွားပြီ။ နောက် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က အတည်ဖြစ်တဲ့အတွက် ရှေ့ဆက်တက်စရာ မရှိဘူး” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အကယ်၍ လက်ခံကြားနာရန် သင့်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်လျှင် လျှောက်ထားခံရသူများနှင့် ရှေ့နေချုပ်ရုံးထံ မိတ္တူ၊ အမှုခေါ်စာ များ ပို့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့နောက် အမှုစစ်ဆေးမည့် ရက်တရက်ကို ရုံးချိန်းခေါ်ပြီး အပြီးသတ်လျှောက်လဲချက် (Final Argument) ကို နှစ်ဖက်မှ ဥပဒေ အကိုးအကား၊ စီရင်ထုံး အကိုးအကားများဖြင့် လျှောက်လဲရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ လျှောက်လဲချက်များကို တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးမှသာ အပြီးသတ် ဆုံးဖြတ်ပေးမည့် တရားသူကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ပါမည့် တရားသူကြီး အဖွဲ့တဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့နောက် စာချွန်တော်အမိန့် ထုတ် သင့်၊ မသင့် နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်မောင်မြင့်က ရှင်းပြသည်။
၂၀၁၁ တွင် ထုတ်ပြန်ထားသည့် ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ စာချွန်တော် အမိန့်ဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်ထဲတွင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေအရ အပြီးအပြတ် အခွင့်အာဏာ ပေးထားသည့် ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ လျှောက်ထားလာပါက ယင်း စာချွန်တော် လျှောက်ထားလွှာကို လက်မခံရဘူးဟု အတိအကျ ညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
“လက်ခံလိုက်တာကိုက ဥပဒေရေးရာ ပြဿနာဖြစ်နေတာ။ ညွှန်ကြားချက် အတိအကျ ရှိတာကို ဆန့်ကျင်ပြီး လက်ခံတာ ကိုက ညီညွတ်မှု မရှိဘူး။ လက်ခံသင့်၊ မသင့်မှာ အောင်မြင်နိုင်ခြေ အရမ်းနည်းတယ်” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေ၊ ပုဒ်မ ၄၀၂ တွင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီးသည့် ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်သည် ပြောင်းလဲ၍ မရ ကြောင်း၊ UEC ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်သည် အပြီးအပြတ် ဖြစ်သည်ဟု အတိအလင်း ပြဋ္ဌာန်းထားရာ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် သည် ပြောင်းလဲစရာ အကြောင်းမရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ထောက်ပြသည်။
]]> ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းမလား၊ နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူမှုတွေကို ရင်ဆိုင်မလား ဆုံးဖြတ်ရမှာ https://burma.irrawaddy.com/opinion/interview/2021/01/28/237176.html Thu, 28 Jan 2021 01:30:29 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=237176
မြန်မာနိုင်ငံဟာ ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကို ကိုယ်ထိန်းမလား။ အခုနကပြောတဲ့ ကုလသမဂ္ဂ ပဋိညာဉ် စာတမ်းနဲ့ အညီ ထိန်းဖို့ တာဝန်ကို ရှိတယ်။ အဲဒီလို မထိန်းဘူး။ ဗြောင်ဆန့်ကျင်မယ်။ ICJ က တိုက်ရိုက် ဘာမှလုပ်လို့ မရဘူးဆို တာမျိုးတွေကို တင်းတင်းခံထားပြီးတော့ မလိုလားအပ်တဲ့ နိုင်ငံတကာရဲ့ အရေးယူမှုတွေကို ရင်ဆိုင်မလားဆိုတာ
The post ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိန်းမလား၊ နိုင်ငံတကာရဲ့အရေးယူမှုတွေကို ရင်ဆိုင်မလား ဆုံးဖြတ်ရမှာ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းကြောင့် ပုဂံကို စနစ်တကျ ပြန်ဖွင့်ပေးရန် ဒေသခံများတောင်းဆို https://burma.irrawaddy.com/business/2021/01/23/236948.html Sat, 23 Jan 2021 11:39:19 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236948
ခရီးသွားလုပ်ငန်းကို အမှီပြုကာ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုနေကြသည့် ဒေသခံများက ပုဂံဒေသရှိ ဘုရားစေတီပုထိုးများ ကိုဗစ်-၁၉ စည်းကမ်းများနှင့်အညီ စနစ်တကျ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်သည်။
The post စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းကြောင့် ပုဂံကို စနစ်တကျ ပြန်ဖွင့်ပေးရန် ဒေသခံများတောင်းဆို appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> တားမြစ်ထားသော်လည်း ပုဂံအမွေအနှစ်ဇုန်အတွင်း တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မှုများ ရှိနေ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/21/236767.html Thu, 21 Jan 2021 01:28:00 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236767
ဌာနက ပုံမှန်လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေချိန် ဘုရားကြီးအနီး ဘူဒိုဇာဖြင့် ထိုးနေသည် ဟူသော ဒေသခံများ၏ သတင်းပေးမှုကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်က သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း
The post တားမြစ်ထားသော်လည်း ပုဂံအမွေအနှစ်ဇုန်အတွင်း တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်မှုများ ရှိနေ appeared first on ဧရာဝတီ.
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင် ပုဂံရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှု နယ်မြေ၏ အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေးဇုန် (Property Zone) အ တွင်း အဆောက်အအုံသစ် တိုးချဲ့ခြင်းများ မပြုလုပ်ရန် တားမြစ်ချက်များ ရှိသော်လည်း ဆက်လက် ဆောက်လုပ်နေမှုများ ရှိနေကြောင်း သိရသည်။
ပုဂံကို ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် တင်သွင်းကတည်းက အနီရောင်ဇုန် ဟုခေါ်သည့် Property Zone အတွင်းရှိ ဟိုတယ်များ ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ရပ်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှိနေသည့် ဟိုတယ်များကိုလည်း အချိန်ကာလ တခုသတ်မှတ်ပြီး ရွှေ့ ပြောင်းပေးနိုင်ရေး စီမံသွားမည်ဟု မြန်မာအစိုးရက ယူနက်စကိုအား ကတိကဝတ် ပြုထားပြီးဖြစ်သည်။
သို့သော် မြေပြင်၌ Propety Zone အတွင်း စီမံကိန်းများကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်နေကြသကဲ့သို့ တချို့က အဆောက် အအုံများကို ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်များနှင့် နီးကပ်စွာ ဆောက်လုပ်နေပြီး စက်ယန္တရားများ အသုံးပြုနေသည်ကိုပါ တွေ့ ရကြောင်း ပုဂံဒေသခံ တဦးဖြစ်သူ ဦးမျိုးဆက်စံက ပြောပြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်က အမွေအနှစ်ဇုန်အတွင်း ဟိုတယ် စီမံကိန်းတခုဖြစ်သော ဧဒင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစုပိုင် Eden Hotel and Resort Bagan ဟိုတယ်ဝန်း အတွင်းရှိ ဘုရားအမှတ် ၁၃၅၈ အနီး၌ စက်ယန္တရားများဖြင့် အဆောက်အအုံ တည်ဆောက်နေသည် ဟုဆိုကာ ဒေသခံပြည်သူများ၏ သတင်းပေးမှုဖြင့် ရှေးဟောင်းသုတေသန ဦးစီးမှူး၊ မြို့နယ် ဒု အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ နယ်မြေခံ ရဲတပ်ဖွဲ့များက ရှောင်တခင် ဝင်ရောက်စစ်ဆေးမှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စစ်ဆေးမှုတွင် လိုက်ပါသွားခဲ့သည့် ဦးမျိုးဆက်စံက ဘုရားအမှတ် ၁၃၅၈ နှင့် ၁၂ ပေခန့်အကွာ၌ ရေကူးကန်၊ ကျား အဝတ်လဲခန်း၊ မ အဝတ်လဲခန်းများ ဆောက်လုပ်နေပြီး ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး စက်ယန္တရားများကိုလည်း တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။
Eden Hotel and Resort Bagan ဟိုတယ်ဝန်း အတွင်း ရှေးဟောင်း စေတီ/ပုထိုး ၂၄ ဆူ ရှိကြောင်း သိရသည်။
ရှေးဟောင်းသုတေသနနှင့် အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာန(ပုဂံဌာနခွဲ)၏ အချက်အလက်များအရ Property Zone အတွင်းရှိ ဟိုတယ် ၁၅ လုံး ရှိသည့်အနက် ၈ လုံးမှာ လုပ်ငန်း လည်ပတ်နေပြီး ကျန် ၇ လုံးမှာ ဆောက်လုပ်ဆဲများဖြစ်ကြောင်း၊ အဆို ပါ ၇ လုံးအနက် ၄၉ ဒသမ ၄၁ ဧက ကျယ်ဝန်းသည့် Eden Hotel and Resort Bagan လည်း ပါဝင်သည်ကိုတွေ့ရသည်။
ဌာနက ပုံမှန်လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်နေချိန် ဘုရားကြီးအနီး ဘူဒိုဇာဖြင့် ထိုးနေသည် ဟူသော ဒေသခံများ၏ သတင်းပေးမှု ကြောင့် ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်က သွားရောက် စစ်ဆေးခဲ့သည်မှာ မှန်ကန်ကြောင်း၊ သို့သော် သွားစစ်ချိန်၌ ထိုကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်နေခြင်းမျိုး မတွေ့ရကြောင်း ပုဂံ ရှေး/သုဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ သန်းထိုက်က ပြောသည်။
“တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့က သူတို့ကို ခွင့်ပြုချက် ပေးထားပြီးသားအတိုင်း ဆောင်ရွက်တာ။ ခွင့်ပြုချက် ကျော်လွန် လုပ် ဆောင်တာမျိုး သွားစစ်တဲ့ အချိန်တော့ မတွေ့ရဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ရှေး/သု ဌာနအနေဖြင့်လည်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များအနီး၊ ဘုရားဘေးဝန်းကျင်များတွင် စက်ယန္တရားများ အသုံးမပြု ဘဲ ဆောင်ရွက်ရန် အမိန့်စာ၊ ညွှန်ကြားစာများ အကြိမ်ကြိမ် ထုတ်ပြန်ပြီး တားမြစ်ထားကြောင်း သိရသည်။
၂၀၀၄၊ ၂၀၀၅ လောက်ကတည်းက ဧဒင်အနေဖြင့် အဆောက်အအုံပေါင်း ၈၁ လုံး ဆောက်လုပ်ခွင့် ရထားပြီး ဖြစ်သော် လည်း ယခုအချိန်ထိ အလုံးစုံ ပြီးစီးမှု မရှိသေးဘဲ ဆောက်လက်စများအား ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း၊ အခန်းဖွဲ့ခြင်း၊ အခန်းတွင်း ပြင်ဆင်ခြင်း စသည်ဖြင့် နည်းနည်းချင်း ဆောင်ရွက်နေပြီး ဟိုတယ်ဖွင့်လှစ် လုပ်ကိုင်သည့် အနေအထားကို မရောက်ရှိ သေးကြောင်း ဒေါက်တာ သန်းထိုက်က ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီက ဧဒင်စီးပွားရေး လုပ်ငန်းစု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးချစ်ခိုင်ကို ဆက်သွယ် မေးမြန်းရာ ရှောင် တခင် ဝင်ရောက် စစ်ဆေးမှုကို မသိသေးကြောင်း၊ လုပ်လက်စများကို ဆက်လုပ်နေခြင်းမျိုး ရှိကြောင်း၊ လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်မှု အနေဖြင့် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးပြီ ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။
ဘုရားများအနီး ဆောက်လုပ်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းက “အဲဒါတွေကတော့ သေချာ တင်ပြပြီးတော့ ရှေးဟောင်းအဖွဲ့ တွေ ဘာတွေနဲ့ သေချာစိစစ်ပြီးတော့မှ ခွင့်ပြုထားတာ” ဟု ဆိုသည်။
စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးဖြစ်သည့် ဦးချစ်ခိုင် အနေဖြင့်၂၀၀၄ ကတည်းက ဆောက်လုပ်ခွင့် ရထားသော်လည်း ၁၇ နှစ် ကြာသည့်တိုင် ဆောက်လုပ်မှု မပြီးစီးသည့်အပေါ် ဒေသခံများက အမျိုးမျိုး ပြောဆိုဝေဖန်နေကြသလို Property Zone အတွင်းရှိ ဟိုတယ်များ ၂၀၂၈ တွင် ဖျက်သိမ်းပေးရမည်ဆိုလျှင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု မရှိသေးသော ဦးချစ်ခိုင်အနေဖြင့် လည်း ၎င်း၏ ဟိုတယ်စီမံကိန်းအား ဝန်ကြီးဌာနကို ပြန်လည် အပ်နှံသင့်သည်ဟူသော ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိသည်။
ဦးချစ်ခိုင်က “အန်ကယ်တို့ကတော့ လုပ်လက်စ တခုကို ပြီးအောင် လုပ်ဖို့ ရှိတယ်။ အခုလည်း နိုင်ငံတော်က ရှေးဟောင်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပညာရှင်တွေ၊ အကြံပေးတွေနဲ့ ဒီပုဂံကိစ္စကို အန်ကယ်တို့ Site တွေလည်း လိုက်စစ်တာ ရှိတာပဲ။ ဆွေးနွေး နေတယ်။ နောက်ဆုံးအဖြေတော့ ဘာမှန်းလည်း မသိရသေးဘူး။ နောက်ဆုံး အန်ကယ်တို့က အများဆိုရင် အများအတိုင်း လိုက်နာရမှာပေါ့။ အန်ကယ်တို့က ရှေးဟောင်းဆိုတဲ့ ဥစ္စာမှာ အတင်းဇွတ် လုပ်နေတာ မဟုတ်ပါဘူး” ဟု ပြောသည်။
Property Zone အတွင်း ဟိုတယ် စီမံကိန်းများ ဆက်လက် လုပ်ကိုင်နေခြင်းသည် ယူနက်စကိုသို့ ပေးထားသည့် ကတိ ကဝတ်ကို မျက်ကွယ်ပြုရာ ရောက်သကဲ့သို့၂၀၁၉ ခုနှစ် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်ဒေသများ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ဥပဒေ ကိုလည်း ချိုးဖောက်ရာ ရောက်ကြောင်း အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင်များက ထောက်ပြသည်။
“သူတို့က ဘာအကြောင်းပြချက်ပေးလဲဆို ဆောက်လုပ်ခွင့် ကို အရင်ကတည်းက ရထားတယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ဆောက်လုပ်ခွင့်သည် ဘယ်တုန်းကပဲ ရရ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဝင်ပြီးသွား တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဆောက်လို့ မရဘူး။ ဆောက်လုပ်ခွင့်ကို အရင်တုန်းက ရထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီအရင်တုန်းက ဆောက် ထားလေ။ အခုမှတော့ ဆောက်လို့ မရတော့ဘူး”
အမွေအနှစ် ထိန်းသိမ်းရေး ပညာရှင်တဦးဖြစ်သူ ဒေါ်ဥမ္မာမျိုးက “သူတို့က ဘာအကြောင်းပြချက်ပေးလဲဆို ဆောက်လုပ်ခွင့် ကို အရင်ကတည်းက ရထားတယ်ပေါ့။ အဲဒီတော့ ဆောက်လုပ်ခွင့်သည် ဘယ်တုန်းကပဲ ရရ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဝင်ပြီးသွား တဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ဆောက်လို့ မရဘူး။ ဆောက်လုပ်ခွင့်ကို အရင်တုန်းက ရထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီအရင်တုန်းက ဆောက် ထားလေ။ အခုမှတော့ ဆောက်လို့ မရတော့ဘူး” ဟု ပြောသည်။
တချို့ကလည်း အဟောင်းပြင်သည် ဆိုပြီးမှ ဆောက်လုပ်ခြင်း၊ တိုးချဲ့ခြင်းများ ရှိနေကြောင်း၊ အဟောင်းပြင်ရာ၌ မဖြစ်မနေ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သလားဆိုသည်ကို ဆန်းစစ်ရမည် ဖြစ်သကဲ့သို့ မဖြစ်မနေ ပြင်ရမည်ဆိုပါကလည်း မည်မျှ အတိုင်း အတာထိသာ ပြင်ဆင်၍ ရမည်ဆိုသည့် ကန့်သတ်ချက် ရှိရမည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ဒေါ်ဥမ္မာမျိုးက “တကယ်တမ်း မဖြစ်မနေ ပြင်ဖို့ လိုသလားလို့ စဉ်းစားရင် သူတို့သည် ၂၀၂၈ ကျရင်တောင် ထွက်ပေးရ တော့မှာလေ။ အခု အချိန်ကျမှ ဒါတွေကို အခိုင်အခံ့ ပြန်ပြင်ဖို့ လိုသေးလား၊ မလိုတော့ဘူးလား ထည့်စဉ်းစားစရာပေါ့။ အခိုင်အခံ့ကြီးတွေကို နောက်ထပ် နှစ်သုံးလေး ငါးဆယ်လောက် ဆောက်ဖို့အတွက်က မလုပ်သင့်တော့ဘူး” ဟု ဆိုသည်။
ပုဂံကို ၂၀၁၉ ဇူလိုင် ၆ ရက်တွင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ကတည်းက မြန်မာနိုင်ငံက ပြင်ဆင်ဖြေရှင်းရ မည့် အချက် ၁၈ ချက်ကို ၂၀၂၁ ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် မတိုင်မီ ပြန်လည် အကြောင်းကြားရမည် ဖြစ်သည်။
ထိုအထဲတွင် အချက်အမှတ် ၁၂ သည် အမွေအနှစ်ဇုန်အတွင်း ဝင်ရောက် ဆောက်လုပ်ထားသည့် မြေပေါ်မြေအောက် အမွေအနှစ်များကို ထိခိုက်ဖျက်ဆီးနေသည့် ဟိုတယ်များနှင့် အခြား ခရီးသွားလာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများကို အပြီး တိုင်ဖယ်ရှားပေးရန် ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ရေရှည် ဟိုတယ် မဟာဗျူဟာကို ICOMOS နှင့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စင်တာတို့၏ အကြံဉာဏ်များရယူလျက် အမွေ အနှစ်ဇုန်ပြင်ပတွင် ဟိုတယ်ဇုန်များ ဖော်ထုတ်ကာ အဆောက်အဦးတည်နေရာ၊ အမြင့်၊ ပုံစံများ ချမှတ်ပြီး အမွေအနှစ် ထိ ခိုက်နိုင်မှုအပေါ် လေ့လာဆန်းစစ်ချက် (HIA) ထောက်ခံချက်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နိုင်သည် ဟူ၍လည်း ပါရှိသည်။
အဆိုပါ မဟာဗျူဟာအား အစိုးရမှ ငှားထားသည့် အကြံပြုပညာရှင် ဒေါက်တာ ရစ်ချတ်မက်ကေးက ရေးဆွဲနေကြောင်း၊ Property Zone အတွင်းရှိ ဟိုတယ်များကို ၂၀၃၂ တွင် ဟိုတယ်ဇုန် ၄ သို့ ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ရှိပြီးသား အဆောက်အအုံများကို အကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်ရန် စသည်ဖြင့် အစောပိုင်း ဆွေးနွေးမှု များ ရှိကြောင်း ပုဂံ ရှေး/သုဌာနခွဲ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာ သန်းထိုက်က ရှင်းပြသည်။
ယင်း မဟာဗျူဟာ ပေါ်လာမှသာ သက်ဆိုင်ရာ ဟိုတယ်ပိုင်ရှင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် အသေးစိတ် ညှိနှိုင်းရမည် ဖြစ်ပြီး အစိုးရထံ ပြန်အပ်သင့်၊ မသင့် ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍လည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးရဦးမည်ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် တိုင်းဒေသကြီး ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ၏ ၁/၂၀၂၀ အစည်းအဝေး ဆုံးဖြတ်အချက်အရ ဧရာဝတီမြစ်ကမ်းဘေးရှိ ဟိုတယ်များအနေဖြင့် လက်ရှိ ရှိပြီးသား အဆောက်အအုံအပြင် အသစ်ထပ် မံ တိုးချဲ့ဆောက်လုပ်ခြင်း မပြုရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာ သန်းထိုက်က “လုပ်ငန်းရှင် ကြီးကြီးထဲက ဧရာဟိုတယ်ဆို ဆောက်လက်စ ဟိုတယ်လေးတွေ မဆောက်ရပါ ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဆက်လုပ်တယ်။ ကျနော်တို့ကလည်း ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူတယ်။ နောက်ပိုင်း သူတို့ မလွတ် ကင်းပါဘူးဆိုတဲ့ ဟိုတယ် အဆောက်အအုံ၂ လုံး T3 နဲ့ T5 ကို ပြန်ဖျက်လိုက်တယ်။ ဒီလို အရေးယူဆောင်ရွက်မှုလည်း ရှိ ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
ထို့ပြင် ပုဂံမြို့သစ် အရှေ့မြောက်ဘက်ရှိ တာမဏီဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် ရှေးဟောင်းဘုရား၊ ပုထိုး၊ စေတီများအနီး ခွင့်ပြု ချက် မရဘဲ ခြံဝန်းခတ်ခြင်း၊ ခေမရဌ် ဘုန်းကြီးကျောင်းဝန်းအား သံဆူးကြိုးများဖြင့် ကာရန်ခြင်း စသည်ဖြင့် နည်းလမ်း အမျိုး မျိုးဖြင့် ကျူးကျော်၊ တည်ဆောက်နေမှုများကိုလည်း တားမြစ်ခြင်း၊ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလ အတွင်းကလည်း ပုဂံမြို့သစ်အနီး ပုဂံ-ချောက် ကားလမ်းဘေးရှိ ပျူလေးဆူတန်း ဘုရားများ၏ နောက် တါင် အဆောက်အအုံ ဆောက်လုပ်ရန်အတွက် မြေအောက်အနက် ၄ ပေမှ ၅ ပေအထိ တူးဖော်ကာ ဖောင်ဒေးရှင်း လုပ် ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေမှုကြောင့် ဝေဖန် ကန့်ကွက်မှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ပုဂံသည် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဒေသတခု ဖြစ်သွားသောကြောင့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် ဒေသနှင့် ထိုက်တန်သည့် စီမံခန့်ခွဲမှု လို အပ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရေးအတွက် ရည်ရွယ် ရေးဆွဲထားသည့် ဘက်စုံ စီမံခန့်ခွဲရေး မူဘောင် (Integrated Management Framework– IMF) ကို ရှေး/သုအပြင် သက်ဆိုင်ရာ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းရှင် အားလုံးက နား လည်ပြီး လိုက်နာ ကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရှေးဟောင်းသုတေသန ပညာအသင်း ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်သူ ဒေါ် ဥမ္မာမျိုးက တိုက်တွန်းသည်။
ပုဂံဒေသတွင် ယဉ်ကျေးအမွေအနှစ်များကို နည်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ထိခိုက်စေမည့် ဆောင်ရွက်ချက်များကြောင့် ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ တည်တံ့ရေးအတွက် အမွေအနှစ် ချစ်မြတ်နိုးသူများက စိုးရိမ်လျက် ရှိကြသကဲ့သို့ ပုဂံကို အန္တရာယ်ရှိနေ သည့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဒေသ (World Heritage in Danger) အဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း ခံရနိုင်သည့် အဆင့်သို့ ရောက်သွား နိုင်ကြောင်း သတိပေး ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိသည်။
]]> မြောက်ဦးဒေသ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ရေး အဟန့်အတားများရှိနေ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/18/236642.html Mon, 18 Jan 2021 10:22:31 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236642
မြေပြင် ကွင်းဆင်းမှုများ မပြုလုပ်နိုင်သော်လည်း၂၀၂၀ အောက်တိုဘာလက စပြီး အွန်လိုင်းအစည်းအဝေး များ ပြုလုပ်ကာ မြောက်ဦးဒေသ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်ဒေသ ဖြစ်လာသည့်အခါ မည်သို့ စီမံခန့်ခွဲ ပါမည် ဟူသည့် အပိုင်းများအတွက် ပြင်ဆင်နေသည်
The post မြောက်ဦးဒေသ ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ရေး အဟန့်အတားများရှိနေ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ကယန်းအမျိုးသားပါတီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/14/236449.html Thu, 14 Jan 2021 14:15:38 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236449
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ရှိ NLD ရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တွေ့ဆုံချိန် ၁ နာရီခန့် ကြာမြင့် ကြောင်း၊ KNP ဘက်မှ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စများကို အဓိက ပြောဆိုတင်ပြခဲ့ကြောင်း
The post NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ကယန်းအမျိုးသားပါတီ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး appeared first on ဧရာဝတီ.
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီမှ ဒေါက်တာ အောင်မိုးညို ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နှင့် ကယန်း အမျိုးသား ပါတီ (KNP) မှ တာဝန်ရှိသူများ ယနေ့ နေ့လယ် ၃ နာရီခန့်တွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းတွေ့ဆုံပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ရှိ NLD ရုံး၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တွေ့ဆုံချိန် ၁ နာရီခန့် ကြာမြင့်ကြောင်း၊ KNP ဘက် မှ လက်ရှိ နိုင်ငံရေးအခြေအနေနှင့် တိုင်းရင်းသားအရေးကိစ္စများကို အဓိက ပြောဆိုတင်ပြခဲ့ကြောင်း ကယန်းအမျိုးသားပါ တီမှ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ ရှမ်းပြည်နယ် ကယန်း တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ခွန်းတင်နုက ပြောသည်။
ခွန်းတင်နုက “အဓိကက NLD နဲ့ တောက်လျှောက် ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားပါတီနဲ့ မဟာမိတ် ဖြစ်တယ်။ အခု သူတို့ လက်ရှိသွားနေတဲ့ ညီညွတ်သော အစိုးရဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အခုမှ အဲဒါတွေ မဟုတ်ဘူး။ နဂိုကတည်းက ဒီဟာတွေ ရှိပါတယ်ဆိုတာကို ပြန်ပြီးတော့မှ အမှတ်ရစေဖို့ သွားပြီးတင်ပြတဲ့ အနေအထားပါပဲ” ဟု ဆိုသည်။
ကယန်း အမျိုးသားပါတီသည်၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် ကယားပြည်နယ် ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်တို့တွင် မဲဆန္ဒ နယ် ၁၀ နေရာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်တွင် ကယန်း တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ကြီး ၁ နေရာ အနိုင်ရရှိခဲ့ သည်။
ယခု တွေ့ဆုံပွဲနှင့် ပတ်သက်၍ အများကြီး မျှော်လင့်ချက် မထားသော်လည်း NLD သည် အစိုးရဖွဲ့မည့် ပါတီဖြစ်ရာ ၎င်းတို့ သိပြီးသားရော၊ မသိသေးသည့် အချက်များပါ တင်ပြခွင့်ရလိုက်ခြင်းကြောင့် စိတ်ကျေနပ်မှုရှိကြောင်း၊ တင်ပြချက်များ မည်မျှထိ အောင်မြင်မှုရှိမည် ဆိုသည်ကိုမူ စောင့်ကြည့်ရဦးမည် ဖြစ်ကြောင်း ခွန်းတင်နုက ပြောသည်။
ခွန်းတင်နုက “ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ နိုင်ငံနဲ့ တိုင်းပြည်နဲ့ လူမျိုးအတွက် စဉ်းစားတဲ့အခါ ဒီလိုတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးတာ ကောင်းတယ်လို့ ယူဆ ပါတယ်။ ကျနော်တို့ ကိုယ်၌ကလည်း ဒီရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှာ ၅ နှစ်တာ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် သူတို့နဲ့ ကြိုတင်ပြီးတော့မှ နွေးထွေးမှုရတယ်။ အခုလို တင်ပြခွင့်ရတဲ့အတွက် လာမယ့် ၅ နှစ် အတွင်းမှာလည်း ဒါတွေကို ပိုပြီး အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
NLD က အမျိုးသားညီညွတ်ရေး အစိုးရဖွဲ့စည်းနိုင်ရေးအတွက် တိုင်းရင်းသားပါတီများကို ပြည်နယ်များ၌ လိုက်လံတွေ့ဆုံ လျက်ရှိရာ ကချင်၊ မွန်၊ ကယားခရီးစဉ်အပြီး ရှမ်းပြည်နယ်ခရီးစဉ်တွင် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက်က ပအို့ဝ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) နှင့် ပလောင်(တအန်း)အမျိုးသားပါတီ(TNP)တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ယနေ့ ကယန်းအမျိုးသားပါတီနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း ဖြစ် သည်။
ထို့နောက် ဇန်နဝါရီ ၁၅ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီတွင် NLD ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တောင်ကြီးမြို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
]]> တရုတ်က ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၃ သိန်းနှင့် ယွမ် ၃ သန်းတန် ဆေးပစ္စည်းများ ကူညီမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/12/236346.html Tue, 12 Jan 2021 11:27:56 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236346
The post တရုတ်က ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၃ သိန်းနှင့် ယွမ် ၃ သန်းတန် ဆေးပစ္စည်းများ ကူညီမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ရခိုင်မှလာသည့် အထောက်အထားမဲ့ ၆ ဦး သင်္ဃန်းကျွန်းတွင် ထပ်မံ ဖမ်းမိ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/12/236334.html Tue, 12 Jan 2021 09:28:49 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236334
ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး မေခအိမ်ရာ အရှေ့၌ ယောင်လည်လည် ဖြစ် နေသည့် အဆိုပါ ၆ ဦးအား မသင်္ကာသဖြင့် အနီးနားမှ လုံခြုံရေးနှင့် ပြည်သူများက မေးမြန်းပြီး သတင်းပေးပို့ခဲ့ရာမှ စစ် ဆေး တွေ့ရှိခဲ့
The post ရခိုင်မှလာသည့် အထောက်အထားမဲ့ ၆ ဦး သင်္ဃန်းကျွန်းတွင် ထပ်မံ ဖမ်းမိ appeared first on ဧရာဝတီ.
ရခိုင်ပြည်နယ် ကျောက်တော်မြို့နယ်မှ အထောက်အထားမဲ့ ဝင်ရောက်လာသူ ၆ ဦးကို ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ သင်္ဃန်း ကျွန်းမြို့နယ်၊ လေးထောင့်ကန် လမ်းမကြီးပေါ်တွင် ထပ်မံ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီ ၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရွှေပြည်သာမြို့နယ်အတွင်း မသင်္ကာဖွယ် အမျိုးသားတဦးအား တွေ့ရှိ၍ စစ်ဆေး ရာမှ ရခိုင်ပြည်နယ် မင်းပြားမြို့နယ်မှ လာရောက်သည့် အထောက်အထားမဲ့ ရောက်ရှိနေသူ ၉၉ ဦးအား ဖမ်းမိခဲ့ပြီး ရက် ပိုင်းအတွင်း ယခုလို ထပ်မံ ဖမ်းဆီးရမိခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ဇန်နဝါရီ ၁၀ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက လေးထောင့်ကန်လမ်းမကြီး မေခအိမ်ရာ အရှေ့၌ ယောင်လည်လည် ဖြစ်နေ သည့် အဆိုပါ ၆ ဦးအား မသင်္ကာသဖြင့် အနီးနားမှ လုံခြုံရေးနှင့် ပြည်သူများက မေးမြန်းပြီး သတင်း ပေးပို့ခဲ့ရာမှ စစ်ဆေး တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက် တာ ကျော်စွာဦးက ပြောသည်။
၎င်းက “ကျောက်တော်ဘက်ကနေ လာတာ။ မလေးရှား သွားမယ်ပေါ့။ သူတို့ကို ငွေ ၁၀ သိန်းနဲ့ ပို့ပေးမယ်ဆိုပြီး ခေါ်လာတာပေါ့။ သူတို့အခေါ် ဘုတ်ပေါ့နော်။ စက်လှေကို ပြောတာ ထင်တယ်။ ဘုတ်နဲ့ လာတယ်။ နောက် အလုံပိတ်ကားနဲ့ ခေါ်လာတယ်။ အဲဒီ ကားသမားက ထားခဲ့တယ်ပေါ့။ သူတို့ကလည်း ပြန်အကူညီတောင်းတယ်။ သူတို့ကို စခန်းပို့ပေးပါတဲ့။ ထမင်းလည်း မစားရသေးဘူးပေါ့နော်” ဟု ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ ၆ ဦးမှာ အမျိုးသားများချည်း ဖြစ်ပြီး အသက်အရွယ်အားဖြင့် လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းများ ဖြစ်ကြောင်း၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကာလ ဖြစ်သည့်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက စစ်ဆေးပြီးနောက် ၎င်းတို့ ၆ ဦးအား သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် ပညာရေး ကောလိပ်ရှိ Quarantine စင်တာသို့ ပို့ထားကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာ ကျော်စွာဦးက “ကိုဗစ်ကာလမှာ ဒေသဖြတ်ကျော်မှုတွေ တင်းကျပ်နေတဲ့ကြားက ဒီလိုဘာလို့ လွတ်ထွက်လာ လဲဆိုတာ ကျနော်တို့လည်း စဉ်းစားစရာ ဖြစ်တယ်။ နယ်စပ်လုံခြုံရေး စသဖြင့် ဝင်ပေါက် ထွက်ပေါက်တွေကို ဒီထက်ပိုပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်နဲ့ တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုအပိုင်းကို ပိုလုပ်နိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့” ဟု ထောက်ပြ အကြံပြုသည်။
ယနေ့နံနက် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ထိုက်၏ ပြောပြချက်အရ အဆိုပါ ၆ ဦး၏ ကိုဗစ်-၁၉ စစ်ဆေးချက် အဖြေမှာ အားလုံး Negative ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းတို့အား ရွှေပြည်သာတွင် တွေ့ရှိခဲ့သူများနှင့် အတူထားရန် နေရာရွှေ့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ ဧရာဝတီက ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဝန်ကြီး ဌာနဝန်ကြီး ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်အား ဆက်သွယ်မေးမြန်းရာ “ဒါ ချိတ်ဆက်မှု ရှိခြင်း မရှိခြင်းက ရဲနဲ့လဝက စစ်ဆေး ဆောင်ရွက်မှုတွေအပေါ်မှာ ပေါ်ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမတို့ကတော့ တနေရာတည်းမှာ ပေါင်းစည်းထားနိုင်ရေး စီ စဉ်ထားတယ်။ နှစ်ခု သုံးခုခွဲပြီး လုံခြုံရေးပေးရတာ အခက်အခဲရှိတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ၆ ဦးကိုလည်း ရွှေပြည်သာမြို့နယ်က ကွန်ပျူတာ တက္ကသိုလ်မှာပဲ ပေါင်းပြီး ထားပါမယ်” ဟု ပြောသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက ရွှေပြည်သာတွင် ဖမ်းမိမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ခေါ်ဆောင်လာသူ ပွဲစား ၄ ဦးအား အမှုဖွင့်ထားကြောင်း၊ ကျန်ဖမ်းဆီးရမိသူများကို ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပြီး Positive ဖြစ်ပါက ကိုဗစ်ကုသရေး စင်တာတွင် ထားရှိပြီး ကျန်သူများကို ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်တွင် လုံခြုံရေး အစောင့်အကြပ်များဖြင့် ထိန်းသိမ်းစောင့် ရှောက်ထားကြောင်း ပြောဆိုသည်။
ဒေါ်မိုးမိုးစုကြည်က “လဝက အက်ဥပဒေအရ လဝကက သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ နေရပ်ပြန်ပို့ရေးကို ဆောင်ရွက်ပါမယ်။ ကျန်တဲ့ တရားရေးအရ ဆက်လက်ပြီး ဆောင်ရွက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ရင်တော့ ရဲဘက်ကနေ စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ရဲနှင့် လဝကတို့၏ စစ်ဆေးမေးမြန်းမှုများအရ ၎င်းတို့လာခဲ့သည့် အရပ်ဒေသတွင် နေထိုင်စားသောက်ရေး ခက်ခဲမှုကြောင့် ပြည်ပထွက်ပြီး အမျိုးသမီးများက အိမ်အကူလုပ်ရန်၊ အမျိုးသားများက စိုက်ပျိုးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် ထွက်လာကြခြင်းဖြစ် သည်ဟု အများစုက ထွက်ဆိုကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးတွင် ယခုလအတွင်း ဖမ်းဆီးရမိသည့် ရခိုင်ပြည်မှ အထောက်အထားမဲ့ ဝင်လာသူ ၁၀၅ ဦး ရှိပြီ ဖြစ်ပြီး ၅ ဦး၌ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး (Positive) တွေ့ရှိရကြောင်း သိရသည်။
ယခုလ ၄ ရက်ကလည်း ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်ခရိုင် ချောင်းသာမြို့၏ အနောက်မြောက်ဘက် ရေမိုင် ၅ မိုင်ခန့် အကွာတွင် တပ်မတော်(ရေ)စစ်ရေယာဉ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များက မသင်္ကာဖွယ် စက်လှေတစင်း ဝင်ရောက်ကြောင်း သတင်း ရ၍ နယ်မြေအုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးပေါင်းပြီး သွားရောက်စစ်ဆေးခဲ့ရာ လှေလုပ်သား ၄ ဦးနှင့်အတူ အထောက် အထားမဲ့ ၇ ဦးအား ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သေးသည်။
]]> မြန်မာဘက်က ခုခံချေပချက်ကို ICJ သို့ အချိန်မီ တင်သွင်းသွားမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/08/236154.html Fri, 08 Jan 2021 13:14:35 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236154
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် လာမည့် ဇန်နဝါရီ ၂၅ ရက်တွင် တင်သွင်းရမည့် ခုခံချေပချက်ကို အချိန်မီ တင်သွင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း
The post မြန်မာဘက်က ခုခံချေပချက်ကို ICJ သို့ အချိန်မီ တင်သွင်းသွားမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> NLD နှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဘယ်လို ဆက်သွားမလဲ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/07/236076.html Thu, 07 Jan 2021 12:00:35 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236076
ကချင်နှင့် မွန် အတွေ့အကြုံကိုယူကာ သေချာပြန်လည် သုံးသပ် ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ အဖြစ်သင့်ဆုံး နည်း လမ်းကို ရှာဖွေလာပြီး ကျန်တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဆိုပါက ပွဲပျက်သည့် အနေအထားထိ ဖြစ်လာစရာ မရှိဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
The post NLD နှင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဘယ်လို ဆက်သွားမလဲ appeared first on ဧရာဝတီ.
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ၏ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ကြိုးပမ်းမှုသည် တာထွက်ချိန်မှာပဲ သဘောထား ကွဲလွဲမှုများ၊ အထစ်အငေါ့များဖြင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပြီး ယင်းအခက်အခဲများအား မည် သို့ ကျော်ဖြတ်ပြီး ရှေ့ဆက်သွားကြမလဲ ဆိုသည်ကို နိုင်ငံရေး အသိုင်းအဝိုင်းက စိတ်ဝင်စားလျက် ရှိသည်။
ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စု ပေါ်ထွန်းရေးအတွက် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း အနိုင်ရ NLD ပါတီက တရားဝင် ထုတ်ပြန်ကြေညာပြီး မကြာခင်မှာပဲ ပါတီ၏ ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းကာ တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လိုက်လံတွေ့ဆုံမှု ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး ခရီးစဉ်အဖြစ် ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်က ကချင်ပြည်နယ်အခြေစိုက် တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်ရ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံနိုင်ခဲ့သော်လည်း ပါတီချင်း တွေ့ဆုံသည့်ပုံစံ မဟုတ်သောကြောင့် ဝေဖန် မှုများ ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထို့နောက် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်၌ ဒုတိယခရီးစဉ် ဖြစ်သည့် မွန်ပြည်နယ်သို့ သွားရောက်ခဲ့ရာတွင်လည်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) နှင့် တွေ့ဆုံမည့်နေရာ ညှိနှိုင်းမရသဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ခဲ့သည်။
ယင်း အဖြစ်အပျက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် NLD က တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံရန် ကျင့်သုံးသည့် နည်းနာများ လိုအပ်ချက်ရှိနေပြီး ပြန်လည် သုံးသပ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (SNLD) ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစိုင်းလိတ်က မှတ်ချက်ပြုသည်။
ကချင်နှင့် မွန် အတွေ့အကြုံကိုယူကာ သေချာပြန်လည် သုံးသပ် ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှ အဖြစ်သင့်ဆုံး နည်းလမ်းကို ရှာဖွေလာ ပြီး ကျန်တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် ဆက်လက် လုပ်ဆောင်သွားမည်ဆိုပါက ပွဲပျက်သည့် အနေအထားထိ ဖြစ် လာစရာ မရှိဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် NLD အနေဖြင့် စစ်မှန်သည့် ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးအတွက် အမှန်တကယ် ပူးပေါင်းလုပ် ဆောင်မည် ဆိုပါက ကိုယ်စားလှယ် အရေအတွက် ဘယ်လောက်ဖြစ်စေ၊ မည်သူ့ကိုပဲ တာဝန်ပေးသည်ဖြစ်စေ နည်းနာနှင့် မူဝါဒ လုပ်ငန်းစဉ်များ အတိအကျ ချမှတ်ပြီးမှသာ တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် ဆက်ဆွေးနွေးစေလိုကြောင်း ၎င်းက အကြံပြု သည်။
ဦးစိုင်းလိတ်က “အဲဒီလို မရှိဘဲနဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ အသံကို လာရောက်နားထောင်တယ်။ ပြီးတော့မှ အပေါ်ကို သွား တင်ပြမယ်။ ပြီးတော့မှ တခါပြန်လာပြီး ဆင်းလာပြီး ချပြမယ်ဆိုတာကတော့ အချိန်ကြန့်ကြာနိုင်တဲ့အပြင်ကို အလုပ်လည်း ဖြစ်လောက်မယ် မထင်ဘူး” ဟု ဆိုသည်။
၎င်း၏ ပြောပြချက်အရ ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ တတိယပတ်လောက်တွင် NLD က ဇန်ဝါရီ ၂ ရက်၌ တွေ့ဆုံရန် ရှမ်းပြည်နယ် စီမံဘဏ္ဍာ ဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က တဆင့် ၎င်းထံ ဆက်သွယ်လာကြောင်း၊ အခက်အခဲ တချို့ကြောင့် Zoom meeting ဖြင့် လုပ်ရန် ကမ်းလှမ်းဖြစ်ကြောင်း ပြောပြသည်။
ထို့ပြင် လကုန်ခါနီး ထပ်ဆက်လာသည့်အခါ NLD ဘက်က ကချင်နှင့် မွန်ကို ဦးစားပေးသွားရန် ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ထား သဖြင့် ရှမ်းပြည်နယ်ကို မလာနိုင်သေးကြောင်း၊ လာမည်ဆိုပါက ၅ ရက် ကြိုတင် အကြောင်း ကြားပေးမည်ဟု ပြောဆိုရာ ယနေ့ (ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်) ထိ ဆက်သွယ်လာခြင်း မရှိသေးသဖြင့် နောက်ထပ် ၅ ရက် အထိ တွေ့ဆုံရန် မည်သည့် အစီ အစဉ်မှ မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ဦးစိုင်းလိတ်က “လောလောဆယ် NLD က အနိုင်ရထားတာဆိုတော့ NLD နဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေး အဖြေရှာနိုင်တယ်။ သဘောတူညီချက်တခု ချမှတ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့ အစိတ်အပိုင်းတွေမှာ လက် တွဲဆောင်ရွက်ဖို့က ကျနော်တို့မှာ ဘာပြဿနာမှ မရှိပါဘူး” ဟုလည်း ပြောသည်။
၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရ ၁၉ ပါတီ ရှိသည့်အနက် NLD နှင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) မှအပ ကျန်ပါတီများသည် ဗမာ မဟုတ်သော တိုင်းရင်းသားပါတီများ ဖြစ်သောကြောင့် NLD အနေဖြင့် ပြန်လည် သုံးသပ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲများကို မရပ်လိုက်ဘဲ ဆက်သွားသင့်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့ လာသုံးသပ်သူများက အကြံပြု တိုက်တွန်းသည်။
မြန်မာ့ မဟာဗျူဟာနှင့် မူဝါဒလေ့လာရေးအင်စတီကျူ၊ ပြင်ပဆက်ဆံ ဆက်သွယ်ရေးဌာန ဒါရိုက်တာ ဦးအောင်သူငြိမ်းက “အခု ဒီဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူမှုမီဒီယာပေါ့။ အဲဒီမှာ တဖက်နဲ့တဖက် ဝေဖန်ပုတ်ခတ်နေကြတာ တော်တော် ဆိုးတယ်။ ဒါနောက်ဆုံး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီထက်ပိုပြီး သဘောထားကြီးဖို့၊ အပြုသဘောဆောင် ဖို့လည်း လိုပါတယ်” ဟု ထောက်ပြသည်။
ရခိုင် အမျိုးသားပါတီ (ANP) နှင့် ကယားပြည်နယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (KySDP) မှ တာဝန်ရှိသူများ၏ ပြောပြချက်အရ NLD ဘက်က တွေ့ဆုံရန် ကမ်းလှမ်းမှု မရှိသော်လည်း ကမ်းလှမ်းလာလျှင် တွေ့ဆုံရန် အသင့်ဖြစ်ကြောင်း၊ တွေ့ဆုံရာ ၌လည်း သီးသန့် အနိုင်ရ ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် တွေ့ဆုံခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ပါတီကရွေးချယ်ထားသည့် ပါတီကိုယ်စားပြု အနေဖြင့်သာ တွေ့ဆုံရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဆွေးနွေးရာ၌ တိုင်းရင်းသားအရေး၊ နိုင်ငံရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စများကို အဓိက ဦးစားပေး ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး မကြာခင် ထပ်ဖွဲ့တော့မည့် တတိယ သက်တမ်း အစိုးရ၏ နိုင်ငံရေး ရပ်တည်ချက်ကိုလည်း သိရှိနိုင်ရန် ဆွေးနွေးသွားမည် ဟု KySDP အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ခူးသဲရယ်က ပြောသည်။
ANP ပါတီ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဒေါ်အေးနုစိန်ကလည်း ဦးဆောင်ဆွေးနွေးမည့်၊ အစိုးရဖွဲ့နိုင်မည့် အနိုင်ရ NLD ပါတီ၏ အစီ အမံ ဆောင်ရွက်ချက်က အခရာကျပြီး ပြည်ထောင်စုအရေးအတွက် စိတ်ကောင်း စေတနာကောင်း သန့်သန့်ဖြင့် အားလုံး ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ညှိနှိုင်းကာ တဖြည်းဖြည်း အောင်မြင်သည့် လမ်းကြောင်းသို့ ဦးတည်သွားနေခြင်းကိုသာ လိုချင်သည်ဟု ဆိုသည်။
NLD အနေဖြင့် ဆွေးနွေးပွဲ ပျက်ခဲ့သည့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီနှင့် ထပ်မံတွေ့ဆုံရန် အစီအစဉ် ရှိမရှိ၊ ကျန်တိုင်းရင်းသား နိုင်ငံရေး ပါတီများနှင့် တွေ့ဆုံမည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင် ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်း မရှိသေးပါ။
ကချင်နှင့် မွန်သို့ သွားရောက်ပြီး ပြန်ရောက်လာသည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီထံ ခရီးစဉ်နှင့် ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာ၂ စောင် တင်ပြထားပြီး ယင်းကော်မတီမှ တစုံတရာ ထပ်မံညွန်ကြားမှု မရှိသေး ကြောင်း၊ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မူတည်ကြောင်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင် ဦးအင်ထုံခါးနော်ဆမ်က ပြောသည်။
နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးသန်းစိုးနိုင် က “အမှန်တော့ ဒီကိစ္စတွေက နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေပါ။ နိုင်ငံရေးကိစ္စဆိုတာ မူ နဲ့ပျော့ပျောင်းမှုကို ပေါင်းစပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ကိုယ်ဆုပ်ကိုင်ထားရမယ့် ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာ မူတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ညှိနှိုင်းရမှာ ဖြစ်ပြီး ဒါတွေ ညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာလည်း ပျော့ပျောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ မူအရတောင် ပျော့ပျောင်းမှု လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုရင် ကျင်းပမယ့် နေရာဒေသတွေ၊ အချိန်အခါတွေ၊ ပါဝင်မယ့်သူတွေ အဲဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဆက်လက် ပြီး အကန့်အသတ်တွေ ထားရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ် အောင်မြင်မှာ မဟုတ်ဘူး” ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။
လက်ရှိ နိုင်ငံ အနေအထားအရ စုပေါင်းပြီး မလုပ်လို့မရမည့် အခြေအနေတွင် စုပေါင်းနိုင်မည့် အနေအထားအတွက် အဖြေ တခု ရှာထားရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ကျန်သည့် နေရာ၊ ရာထူးကိစ္စများ ဆွေးနွေးရန် ပိုမို ခက်ခဲ သွားလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြ ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိနေသည်။
]]> သမ္မတနှင့် ရွေး/ကော် ဥက္ကဋ္ဌတို့ စာချွန်တော်လျှောက်ထားခံရမှု ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/06/236027.html Wed, 06 Jan 2021 11:17:45 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236027
The post သမ္မတနှင့် ရွေး/ကော် ဥက္ကဋ္ဌတို့ စာချွန်တော်လျှောက်ထားခံရမှု ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> မဲ မသမာမှု ဖြစ်စေနိုင်သည် ဟူသော တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို UEC တုံ့ပြန် https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/30/235794.html Wed, 30 Dec 2020 13:21:40 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=235794
ရွေးကောက်ပွဲ လုုပ်ငန်းစဉ်များကိုု ပျက်ပြားစေရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို လက်မခံသည့်သဘော သက် ရောက် စေသည့် သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အလားတူ ဆောင်ရွက်ချက်များကို နုုိင်ငံရေးပါတီများက ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့ အစည်းများကဖြစ်စေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုကြရန် ကော်မရှင်က သတိပေးထား
The post မဲ မသမာမှု ဖြစ်စေနိုင်သည် ဟူသော တပ်မတော်၏ ထုတ်ပြန်ချက်ကို UEC တုံ့ပြန် appeared first on ဧရာဝတီ.
၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲစာရင်း မှားယွင်းမှုများ အပေါ် အခြေခံ၍ မဲမသမာမှု ဖြစ်စေနိုင်သော သံသယဖြစ် ဖွယ် အချက်များဟု စွပ်စွဲပါရှိသည့် တပ်မတော်၏ မဲစာရင်းစိစစ် ထုုတ်ပြန်ချက်အပေါ် ပြည်ထောင်စုု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မ ရှင် (UEC)က ပြန်လည် တုံ့ပြန်လိုက်သည်။
UEC ၏ ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်စွဲပါ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် တပ်မတော် သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေး အဖွဲ့က ထုတ်ပြန်နေသည့် မြို့နယ် အချို့၏ မဲစာရင်းများသည် ဒုတိယအကြိမ် ကပ်ထားကြေညာသည့် မဲစာရင်းများဖြစ်ပြီး အမှားအယွင်းများ ဖြစ်နေပါက ပြင် ဆင်ရန်အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုသာ ဖြန့်ဝေထားသည့် မဲစာရင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
အဆိုပါ မဲစာရင်းကို တပ်မတော်အနေဖြင့် မည်သည်ကရသလဲ ဆိုခြင်းမျိုး ထောက်ပြထားပြီး တပ်မတော်က ယင်းမဲစာရင်း ကို အခြေခံကာ သုံးသပ် ထုတ်ပြန်နေသော်လည်း ထိုမဲစာရင်းသည်၂၀၂၀ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် မဲပေးသည့် နောက်ဆုံးမဲ စာရင်း မဟုတ်ကြောင်း ပါရှိသည်။
ထို့ပြင် ယခုအချိန်ကာလသည် ရွေးကောက်ပွဲ အကြိုကာလနှင့် ရွေးကောက်ပွဲနေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ ပြစ်မှုများနှင့် တရားမဲ့ပြုကျင့်မှုအတွက် တင်သွင်းလာသည့် ကန့်ကွက်လွှာများကိုုလည်း စစ်ဆေးနေသည့် ကာလ ဖြစ် သည်။
ထိုသို့ ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်များကို ပျက်ပြားစေရန်နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို လက်မခံသည့်သဘော သက်ရောက် စေသည့် သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်များ၊ အလားတူ ဆောင်ရွက်ချက်များကို နိုင်ငံရေးပါတီများက ဖြစ်စေ၊ အဖွဲ့အစည်း များကဖြစ်စေ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုကြရန် ကော်မရှင်က သတိပေးထားသည်။
ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ လေ့လာစောင့်ကြည့်မှုများ ပြုလုပ်နေသည့် The Fifth Pillar အဖွဲ့မှ Program Director ဦးနေဝင်း နိုင်က “ဒီပြဿနာ ပြေလည်သွားချင်ရင် မဲစာရင်းရဲ့ Final version (နောက်ဆုံးမဲစာရင်း) ဖြစ်တဲ့ဟာကို UEC က သက် ဆိုင်တဲ့ Stakeholder များ အားလုံးကို ထုတ်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးက တော်တော်ကြီးကို ရှင်း ရှင်းလင်းလင်း ဖြစ်သွားမယ်လို့ ထင်တယ်” ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်တိုင်း ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုရှိ မဲရုံတခုတွင် မဲရေတွက်နေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဧရာဝတီ)
မဲစာရင်းကိစ္စသည် နိုင်ငံသားအားလုံးနှင့်ဆိုင်သည့်ကိစ္စ၊ မဲစာရင်း မှန်ကန်ရေးသည် မဲဆန္ဒရှင်တိုင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတိုင်းက စိတ်ဝင်တစား ရှိရမည့် ကိစ္စတခုဖြစ်သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာ အနိုင်အရှုံး ဖြစ်သည့်ကိစ္စ၊ မဲစာရင်းမှားယွင်းသည် ဟူသော ကိစ္စများနှင့် ပတ်သက်၍ တပ်မတော်က ဆောင်ရွက်ခြင်းထက် နိုင်ငံရေးပါတီများက ဆောင်ရွက်လျှင် ပိုသင့် လျော်မည် ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ရှင်းပြသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက UEC အနေဖြင့်လည်း ယခုလို တန်ပြန်သတိပေးစာများ ထုတ်ပြန်နေမည့်အစား လူတိုင်းစိတ်ဝင် စားနေသည့် နောက်ဆုံး မဲစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ပေးပြီး မဲဆန္ဒနယ်တခုစီအလိုက် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ၊ မဲလာပေးသူ စာရင်း များကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ချပြလုက်မည် ဆုပါက အဖြေတခု ထွက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု UEC ၏ တုံ့ပြန်မှုသည် အဖြေကို မရောက်ကြောင်း ထောက်ပြသည်။
ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အနေဖြင့် မဲစာရင်းများကို အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန၏ စာရင်းများအပေါ် အခြေခံကာ ပြုစုခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ မဲစာရင်း ပြင်ဆင်၊ ပယ်ဖျက်၊ ဖြည့်စွက်မှုများ ပြု လုပ်နိုင်ရန်၂ ကြိမ်တိုင် ကြေညာကပ်ထားပေးခဲ့သည်။
တပ်မတော်က မဲစာရင်းတွေ့ရှိမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ၃ ကြိမ် ထုုတ်ပြန်ထားပြီး ဖြစ်ကာ၊ ယင်းစိစစ်တွေ့ရှိမှုများ ထုုတ်ပြန် ထားချက်အရ ပုဗ္ဗသီရိမြို့နယ်၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ တံတားဦးမြို့နယ်၊ မြစ်ကြီးနားမြို့နယ်၊ လယ်ဝေး မြို့နယ်၊ စေတုတ္တရာမြို့နယ်၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ရမည်းသင်း မြို့နယ်၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်၊ တနုုိင်းမြို့နယ်တုုိ့တွင် မဲမသမာမှု ဖြစ်နုုိင်သည့် အရေအတွက် ၁၂၉၂၆၁ ဦး ရှိသည်ဟုု ဆိုသည်။
၂၀၂၀ အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲသည် ကုုိဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါ ကန့်သတ်မှုများကြောင့် မဲဆွယ်စည်းရုုံးခွင့်များ ကန့်သတ်ခံ ရခြင်း၊ မဲစာရင်း မှားယွင်းမှု၊ ကြိုတင်မဲ စာအိတ်များ ပေါက်ပြဲမှု စသည့် အားနည်းချက်များ ရှိခဲ့သော်လည်း ဖြစ်စဉ်တခုလုံး ကို ခြုံငုံသုံးသပ်ပါက ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်စွာ မဲပေးခွင့်နှင့် တည်ငြိမ်မှု ရှိခဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်အပေါ် လက်ခံ ကြောင်း ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်သူများနှင့် နိုင်ငံတကာက အသိအမှတ်ပြုထားသည်။
]]> ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ ဆက်တိုက် ကျဆင်းမှု အခြေအနေကောင်းတရပ် ဟုဆို https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/28/235659.html Mon, 28 Dec 2020 13:28:21 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=235659
ကိုဗစ်-၁၉ ကူးစက်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေးရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေပြီး မကြာသေးမီရက်ပိုင်းက အိန္ဒိယထိပ်တန်း ဆေးကုမ္ပဏီတခုဖြစ်သည့် Serum Institute တို့ကြား ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး လူ ၁၅ သန်းစာအတွက် ဝယ်ယူရေး နား လည်မှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။
The post ကိုဗစ်ပိုးတွေ့လူနာ ဆက်တိုက် ကျဆင်းမှု အခြေအနေကောင်းတရပ် ဟုဆို appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> ICJ က ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် အထူးကော်မတီ မြန်မာအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိမလဲ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/12/24/235449.html Thu, 24 Dec 2020 12:01:24 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=235449
ဂမ်ဘီယာနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံအား ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းနေ မွတ်စလင်များကို လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်မှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် တိုင်ကြားခဲ့မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ICJ က မြန်မာ လိုက်နာရမည့် ကြားဖြတ်အစီအမံ ၄ ချက်ကို ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ တွင် ချမှတ်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်း ယခုအခါ နောက်ဆက်တွဲ လုပ်ဆောင်ချက်အဖြစ် ထိုကဲ့သို့ ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
The post ICJ က ဖွဲ့စည်းလိုက်သည့် အထူးကော်မတီ မြန်မာအပေါ် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု ရှိမလဲ appeared first on ဧရာဝတီ.